Egypta: Nogadraina Indray Ireo Bilaogera … Ary Navotsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 8:35 GMT
(Marihina fa tamin'ny 4 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Amin'ny toe-javatra izay lasa mahazatra ankehitriny, bilaogera Egyptiana malaza miisa roa, niaraka tamin'ny mpisolovava iray mpiaro ny zon'olombelona no notazomina am-ponja ary navotsotra avy eo.
Bilaogera iray hafa ihany koa no nantsoina an-telefaonina mba ho tonga tany amin'ny tobin'ny polisy – saingy tsy nety nanao izany izy raha tsy nahazo fampiantsoana ofisialy. Raha nitanisa ireo antony ara-piarovana, nifandray tamin'ny GV ity bilaogera fahatelo ity ary nangataka ny mba hanaisotra ny raharaha rehetra momba azy.
Alaa Abdel Fattah sy ny vadiny Manal ireo bilaogera roa ary Jamal Eid, talen'ny Tambajotra Arabo ho an'ny Fampitam-baovao momba ny Zon'olombelona no mpisolovava. Efa nigadra i Alaa teo aloha noho ny fikatrohany.
Nanambara ny ahiahiny momba ny fivoaran-draharaha ilay bilaogera Egyptiana monina any Washington DC, Nora Younis, tamin'ny filazana fa manery ireo bilaogera ny manampahefana ary manohy ny fanamafisany hatrany ny fifandonana tamin'izy ireo.
Nampanantsoina ny bilaogera Alaa sy Manal, niaraka tamin'ny talen'ny Tambajotra Arabo ho an'ny Fampitam-baovao momba ny Zon'olombelona Jamal Eid, mba hiseho eo anoloan'ny Mpampanoa Lalàna ary nohadihadiana noho ny faniratsirana ny mpitsara Abdel Fattah Murad izy ireo. Nametraka fitoriana tamin'ny governemanta i Murad ary nangataka ny fanakatonana ireo tranonkala sy bilaogy miisa 13, izay mampiroborobo ny fahalalahana miteny sy ny zon'olombelona ary nampiseho ny fampijaliana izay natao tamin'ny olom-pirenena tao amin'ny biraon'ny polisy. Navitrika tamin'ny fanaovana fanentanana ho fanoherana ny Minisiteran'ny mpanao didy jadona sy ny fanjakazakan'ny polisy ihany koa ireo tranonkala. Mijery ny fitarainan'ny olona sy miezaka manasitrana ireo niharan'ny fampijaliana ihany koa ny bilaogy sy ny tranonkala, “hoy i Younis nanazava.
“Nanomboka ity resaka mampihomehy ity rehefa navoakan'i Abdel Fattah Murad ny bokiny momba ny famahanana bilaogy izay nanangonany ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny fampitandremana tamin'ny hala tahaka. Nanao ny fangalana tahaka ny pejy miisa 50 tao amin'ny tatitra izay nomanin'ny Tambajotra Arabo ho an'ny Zon'olombelona ihany koa anefa izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa tsy niaiky ny zavatra nataony izy dia ireo bilaogera no nomelohin'ny mpitsara,” hoy hatrany izy.
“Izany rehetra izany dia heverina ho toy ny ampahany amin'ny fandrafetana amin'ny ankapobeny ny famoretana izay ampiasain'ny fanjakam-polisy – mifanaraka amin'ny Lalàmpanorenana – hanoherana ireo bilaogera izay mavitrika ara-politika. Na dia navotsotra aza izy ireo, raha toa ka mitranga izany dia tsy mahagaga raha toa ka haverina hotsaraina indray taorian'ny fihainoana ny antso an-telefaonina nataon'izy ireo sy ny fandraketana ny lisitry ny olona nifanerasera tamin'izy ireo – izay efa vita avokoa araka ny Lalàmpanorenana sy ny Lalàna. Na izany na tsy izany, tafiditra ao anatin'ny sokajy misy ny fanalam-baraka ny zava-drehetra izay lazaina fa hanenjehana an'i Mubarak ankehitriny avy amin'ny Governemanta sy ny fanitsiana faikany momba ny Lalàmpanorenana. “
Nanome ny fanavaozam-baovao momba ny fepetra iainan'ireo mpikatroka voatazona ihany koa i Younis .
Fanavaozam-baovao: 4.40 ora hariva tany Kairo: Nandà ny famotsorana an'i Alaa Saif, Manal Bahi ary Jamal Eid ny Biraon'ny Polisy Al Duqi noho ny filazana fa tsy tao ny manamboninahitra polisy misahana ny raharaha
3.40 ora hariva tany Kairo: Nafindra toerana tany amin'ny Biraon'ny Polisy tao Duqi i Alaa, Manal ary Jamal. Voatery niseho tany amin'ny biraon'ny polisy ireo bilaogera sy mpikatroka .
Sandmonkey, Hossam El Hamalawy ary Malek. no bilaogera hafa nitatitra ny zava-nitranga.
01 Febroary 2021Afrika Mainty